OBB သည်ဗီယင်နာကိုမကြာခဏလေ့ကျင့်သည် – Graz, Salzburg – ဗီယင်နာ, Linz – စိန့်. Polten, Graz - Salzburg. OBB ရထားဖြင့်ဥရောပအတွင်းရှိအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့လည်းသင်သွားနိုင်သည်.
OBB ရထားလက်မှတ်တွေက အဆိုပါ Off- အထွတ်အထိပ်ကာလအတွင်းစျေးနှုန်းချိုသာ, သီတင်းပတ်၏အစနှင့်တစ်နေ့တာအတွင်း. သင်ရရန်သေချာပါသည် စျေးနှုန်းချိုသာရထားလက်မှတ်တွေ တစ်ပတ်အတွင်း. အင်္ဂါနေ့မှာ, ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ကြာသပတေးနေ့, OBB ရထားလက်မှတ်သည်စီးပွားရေးအရအများဆုံးဖြစ်သည်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နံနက်ခင်းနှင့်ညနေခင်းများတွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခရီးသွားလာသောစီးပွားရေးသမားများကြောင့်ဖြစ်သည်, ရထားလက်မှတ်တွေကပိုကုန်ကျတယ်. ဒါဟာမနက်နှင့်ညနေခင်းအသွားအပြန်အကြားအချိန်မရွေးခရီးသွားရန်ဝေးစျေးနှုန်းချိုသာသည်. တနင်္ဂနွေသည်ရထားများအတွက်အခြားအထွတ်အထိပ်ကာလဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့များတွင်ဖြစ်သည်. OBB ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများလည်းမြင့်တက်လာသည် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များနှင့်ကျောင်းပိတ်ရက်များ.
OBB ရထားများ မြင့်မားသောဝယ်လိုအား၌ရှိကြ၏, နှင့်အနည်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူ, ၎င်းတို့သည်သြစတြီးယားရှိရထားများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်. သူတို့ကရထားလက်မှတ်ကန့်သတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ထားတယ်၊ စီးပွားရေးစီးပွါးရေးလက်မှတ်မဟုတ်ရင်လက်မှတ်လဲလှယ်ခြင်းကိုတားမြစ်တဲ့သို့မဟုတ်ပြန်အမ်းမယ်လို. လူကြီးမင်း၏လက်မှတ်များကိုလူသုံးများရောင်းနိုင်သည့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များရှိသေးသော်လည်း, လက်မှတ်ရောင်းအားကို OBB မှခွင့်မပြုပါ. ဒါကသင့်ကိုဘယ်လိုချွေတာမလဲ? သင်၏အချိန်ဇယားသေချာမှုရှိမှသာလက်မှတ်တစ်စောင်ကိုနှစ်ခါကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်းမှသက်သာရာရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာတစ်ခုခုပေါ်လာပြီးမူရင်းလက်မှတ်ကိုသင်မသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။.
ဒေသခံနိုင်ငံသားများအတွက်, subscriptions နှစ်ခုအမျိုးအစားများရှိပါတယ်, အဆိုပါ Vorteilscard နှင့် Osterreichcard. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတွက်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြိုတင်ဝယ်ယူရန်အကြံပေးပြီးလျှင်သင်သည်စျေးအသက်သာဆုံးရွေးချယ်မှုကိုပေးလိမ့်မည်.
ဟုတ်ကဲ့. သင်ပျော်ရွှင်နိုင်သည် OBB ရထားအားလုံးအတွက်အခမဲ့ WiFi အင်တာနက် သင် OBB လက်မှတ်ဝယ်သည့်အခါနှင့်အားလုံးခရီးသွားအတန်း (ဦး စားပေး SaveATrain.com အပေါ်.